साेकेस हेरेर हाेइन, नया प्रविधि बुझेर जानुहाेस् - पौडेल - NepalDut NepalDut
साेकेस हेरेर हाेइन, नया प्रविधि बुझेर जानुहाेस् – पौडेल
युवराज पौडेल क्यान महासंघ कास्कीका अध्यक्ष हुन् । क्यान कास्कीले यही फागुन १८ देखि २४ गतेसम्म १० औं संस्करणको भायानेट क्यान इन्फोटेक गर्दै छ । यसै क्रममा इन्फोटेक आयोजना गर्नुको उद्देश्य, आकर्षण लगायत विविध विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी ।
यसपालि क्यान इन्फोटेकमा के के हुनेछ ?
हामी प्रविधि अनुसार चल्न बाध्य छौं । अब धेरै काम इन्टरनेटबाटै हुने भइसक्यो । यो प्रविधि र अनलाइनको मेला भएको हुनाले इन्टरनेट र अनलाइनका कुरालाई जोड दिनेछौं । यो मेला सामान बेचविखन गर्ने, नाफा कमाउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको होइन । यो त नेपालीलाई सूचना, प्रविधि क्षेत्रका नवीन आविष्कारबारे बुझाउनका लागि गरिएको हो । मेलामा १ सयभन्दा बढी स्टल राखिनेछ । सिटी रेबानको महोत्सव र हाम्रो महोत्सव एकै स्थानमा हुँदै छन् ।
नाम मेला, महोत्सव भए पनि अरु बेला बजारमा पाइने सामग्रीहरुकै बिक्री, वितरण, अझ अरु बेलाभन्दा पनि महंगो हुन्छ भन्ने गुनासो छ । क्यान मेला यसबाट मुक्त छ ?
यो चाहिँ हेराइ र बुझाइमा फरकका कारण हो । मेलालाई गम्भीर तरिकाले नबुझी गरिएको टिप्पणी हो भन्छु म । हामीले प्रदर्शनी भनेका छौं । मेलामा हामीले नयाँ प्रविधि, सामग्री प्रदर्शन गरेका हुन्छौं । प्रदर्शनीमा हामी नयाँ प्रविधि र उच्च गुणस्तरको लगेका हुन्छौं, यस्ता सामग्री आवश्यक हुनेले किन्ने कुरा भयो । उच्च क्षमता, नयाँ प्रविधि र लेटेस्ट मोडेलका सामान अरु भन्दा केही महंगा चाहिँ हुन्छन् नै । तिनै वस्तु बाहिर बजारमा कतिमा पाइन्छन्, त्यो बुझ्नुपर्छ ।
सूचना, प्रविधि मानव जीवनकै अभिन्न अंग भइसकेको छ । तथापि यो मेलाको लक्षित वर्गचाहिँ को हुन् ?
विशेष गरी युवा वर्ग नै हो । आइटीसँग रमाउने, आइटीलाई प्रयोग गरेर व्यवसाय गर्नेहरु हुन् । साधारणतया कलेज पढ्नेदेखि व्यवसाय धन्नेहरुसम्मलाई महोत्सवले समेट्ने प्रयत्न गरेको छ ।
आइटीलाई बुझाउन कस्तो पहल गर्नुहुन्छ ?
सूचना, प्रविधि भनेको नै ल्यापटप हो, आइटी भनेको नै ल्यापटप हो भन्ने धेरैको बुझाइ छ । त्यो नभई यो हरेक सूचना प्रविधिको मेला हो यो । अहिले नयाँ नयाँ आएका साधन, स्रोत, इन्टरनेट, नयाँ विशेषताहरु त्यहाँ समावेश भएका हुन्छन् । दर्शक सोकेस हेरेर फर्किने चलन फेर्नुपर्छ । यो बुझ्ने र बुझाउने मेला हो । किनबेच गर्नमात्र त हाम्रा सो रुम, पसलहरु अरु बेला पनि छँदै छन्, हामी त्यहाँ गएर किन्दिनुस् भन्दा पनि बुझ्दिनुस् भनी आग्रह गर्छाैं । हाम्रा प्रायोजक र हामी आयोजकको अपेक्षा पनि यही छ ।
आइटीमा लगानी गर्नुपर्छ, यो व्यापार व्यवसाय र जीवनकै एउटा अंग हो भन्ने कुरा सर्वसाधारणले कत्तिको बुझेको पाउनुभएको छ ?
आइटी सामान्य मानिसदेखि सरकार सञ्चालक सबैलाई चाहिन्छ । आइटीको विकास नभएसम्म समृद्धि सम्भव छैन । नयाँ प्रविधि आएरमात्र विकास हुँदैन । यसबारे सचेतना पनि जरुरी छ । समयको बचत र कम खर्चमा कामहरु सजिलै हुनसक्ने पेमेन्ट गेटवे प्रयोग गर्ने चलन बढ्दै छ । हामी बुझाउने कोशिशमा छौं । यो त्यति साह्रो महंगो शिक्षा पनि होइन । चासो राखे बुझ्न सम्भव छ । यही बुझाउने ध्येयले नै मेला हुँदै छ ।
क्यान इन्फोटेकमा पुराना संस्करण हेरिसकेका दर्शक यसपालि किन आउने ? के छन् यसपालिका खास विशेषता ?
सामान उस्तै भए पनि प्रविधि सुधार भएर आउँछन् । मेरो अफिस सेटअपका लागि मैले के परिवर्तन गर्नुपर्छ ? मैले काम गरिरहेको प्रविधिभन्दा सजिलो, प्रभावकारी अरु प्रविधि पनि छन् कि भनेर बुझ्ने अवसर हो यो । प्रविधि एकैचोटि परिवर्तन भएर आउँदैन । विस्तारै परिवर्तन हुन्छ । कुनै बेला मसँग ७ किलोको ल्यापटप थियो, अहिले ७ सय ग्राममा ल्यापटप आएका छन् ।
सूचना, प्रविधिको व्यवसाय गर्नेहरुका चुनौति के छन् ?
मानिसको चाहना फेरियो छ । डेस्कटप, ल्यापटपका आकांक्षीहरु अहिले मोबाइलतिर जाँदै छन् । यसले गर्दा कम्प्युटर विक्रीवितरण नै निकै कम भइसकेको छ । हामी व्यवसायीमा चुनौति थपिएका छन् । व्यवसाय गर्ने साथीहरुले प्रविधि, ग्राहकको चाहना अनुसार परिमार्जन पनि हुन जरुरी छ । कम्युटर एसोसिएसनमा हामी ४ प्रकारका व्यवसायी आवद्ध छौं । शिक्षा प्रदायक वा तालिम दिने इस्टिच्युटहरु, बेचविखन गर्नेहरु, सफ्टवेयर उत्पादक र मर्मत गर्ने व्यवसायीहरु संस्थामा आवद्ध छन् ।
चार प्रकृतिमा २० प्रतिशत जति सेल्सका साथीहरु हुनुहुन्छ । करिब ५० प्रतिशत शिक्षा प्रदायक, १० प्रतिशत जति मर्मतका र २० प्रतिशत जति सफ्टवेयरका साथीहरु हुनुहुन्छ । संस्था यसरी बनेको छ । हरेक पेशामा चुनौती छ हुन्छन् नै । हाम्रो मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ व्यवसायिक हकहित हो । हामीले वर्षभरिमा गर्ने धेरै कार्यक्रममध्ये एक हो इन्फोटेक । हाम्रा सदस्यहरुको व्यवसायिक हकहित र स्तरोन्नतिको कुरा, व्यवसायिक समस्या आउँदा एकजुट भएर समाधान गर्नु हाम्रो उद्देश्य हो । सम्भव भएसम्म नेपाल सरकारले ल्याएका सूचना, प्रविधिका सबैजसो योजनामा हामी सहयोग बन्न, कतै न कतै हिस्सेदार बन्न चाहन्छौं । स्मार्ट सिटी सरकारले ल्याउन लागेको अवधारणालाई साकार पार्ने प्रविधिहरु हामी प्रदर्शन गर्र्दै छौं । मेलामा आएर सूचना, प्रविधिका नयाँ विकासबारे बुझिदिनुहुन भन सबैलाई आग्रह गर्दछु ।